ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဘားပိုင်ရှင်တစ်ဦးက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းကတ်ပြား အတုများ ရောင်းချမှုဖြင့် တရားစွဲခံရ - Xinhua News Agency
COVID-19 UPDATES North America World WORLD မြန်မာ-ENG
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကောင်တီ၊ ပိုမိုနာမြို့ရှိ California Polytechnic State တက္ကသိုလ်ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနေရာသစ်၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေစဥ် (ဆင်ဟွာ)
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ မေ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း San Joaquin ကောင်တီ၊ Clements ရပ်ကွက်ရှိ ဘားပိုင်ရှင်တစ်ဦးသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်း ကတ်ပြားအတုများ ရောင်းချမှုအတွက် တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံရကြောင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား အရက်အဖျော်ယမကာထိန်းချုပ်ရေးဌာန (ABC) က ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဘားတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်းကတ်ပြားအတုများ ရောင်းချနေကြောင်း တိုင်ကြားချက်ကို အာဏာပိုင်များက လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ABC က မေ ၅ ရက်၌ ထုတ်ပြန်သော သတင်းအရ သိရသည်။
အဆိုပါကတ်များ၏ တန်ဖိုး သို့မဟုတ် မည်မျှရောင်းချခဲ့သည်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
“ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အလေးမထားတဲ့သူတွေ ကျွန်မတို့ ရပ်ရွာအတွင်းမှာရှိနေတာ စိတ်ပျက်အားလျော့စရာပါပဲ။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတ်ပြားအတုတွေ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အတုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းက ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်အနီးဝန်းကျင်က လူတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်” ဟု San Joaquin ကောင်တီ ခရိုင်ရှေ့နေ့ Tori Verber Salazar က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ သံသယရှိသူသည် မှတ်ပုံတင်မရှိသော သေနတ်ကိုင်ဆောင်မှု၊ အစိုးရတံဆိပ်တုံးအတုပြုလုပ်မှုနှင့် Pfizer ၊ CVS နှင့် အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာတို့၏ အထောက်အထား ခိုးယူမှုများ အပါအဝင် ပြစ်မှုစွဲချက်သုံးခု ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း San Joaquin ကောင်တီ ခရိုင် ရှေ့နေရုံးအရ သိရသည်။
အမေရိကန် ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်း ကတ်ပြားအတုများ ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ပြစ်မှုမြောက်ကြောင်း မတ် ၃၀ ရက်က အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
“COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်း မှတ်တမ်းကတ်ပြား ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်အနီးဝန်းကျင်အား အန္တရာယ်ရှိစေကြောင်းနှင့် သင့်အနေဖြင့်လည်း ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” FBI က ဖော်ပြထားသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အစိုးရမှ မေ ၆ ရက်အထိ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားချက်အရ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသူ ဒေသခံများ၏ ၄၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသည့်အပြင် နောက်ထပ် ၁၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စီ ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
LOS ANGELES, May6(Xinhua) — A bar owner in Clements, an unincorporated community in Central California’s San Joaquin County, was arrested on charges of selling fraudulent COVID-19 vaccination cards, the California Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) announced.
The authority receivedacomplaint that fake vaccination cards were being sold at the bar, according toareport published by ABC on Wednesday.
It’s not clear how much the cards cost or how many were allegedly sold.
“It is disheartening to have members in our community show flagrant disregard for public health in the midst ofapandemic. Distributing, falsifying or purchasing fake COVID-19 vaccine cards is against the law and endangers yourself and those around you.” Tori Verber Salazar, San Joaquin County District Attorney said inapress release.
The suspect would face three felony charges, including carrying an unregistered firearm, forgery ofagovernment seal and identity theft of Pfizer, CVS and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, according to the San Joaquin County District Attorney’s Office.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) publishedapublic service announcement on March 30 warning the public that involving in fake vaccination cards business isacrime.
“If you make or buyafake COVID-19 vaccination record card, you endanger yourself and those around you, and you are breaking the law,” the FBI noted.
According to the latest data updated by the Californian government, as of Thursday, 42.3 percent of eligible residents have been fully vaccinated and an additional 18.6 percent received at least one dose of vaccine. Enditem
A health care worker administersadose of COVID-19 vaccine toarecipient atanew vaccination site in the California Polytechnic State University in Pomona, Los Angeles County, California, the United States, Feb. 5, 2021. (Xinhua)
အိန္ဒိယတွင် ကပ်ရောဂါအခြေအနေ အထွတ်အထိပ်သို့မရောက်ရှိသေးသော်လည်း ကျေးရွာများတွင် ပူပန်စရာအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ